Eebbe ha u raxmado ra'iisul wasaare Nuur Cadde - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Miskiin-Macruuf-Aqiyaar, April 1 in Politics
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xassan Xusseen (Nuur Cadde) ayaa la xaqiijiyey in uu maanta ku geeriyoodey magaalada London ee dalka Britain.
War ka soo baxay Wiilkiisa Xaaji Maxamed Nuur Xassan Xusseen ayaa lagu ogeysiiyay shacabka Soomaaliyeed gaarida Nuur Cadde oo waayadii ugu danbeeyayba la il darnaa cudurkan COVID-19.
Nuur Cadde ayaa dalka ka soo noqday Ra'iisal Wasaare intii u dhexeysay 2007-2009 dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Alle ha u naxariistee Cabdullaahi Yuusuf Axmed
Khayre oo war ka soo saaray geeridii ku timid Nuur Cadde
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay Allaha u naxariistee geeridii ku timid, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) oo ahaa ra’iisul wasaare hore, kaas oo saaka ku dhintay dalka Ingiriiska.
Khayre ayaa marka tacsi u diray dhammaan Ummadda Soomaaliyeed iyo qoyska uu ka baxay marxuumka oo u geeriday caabuqa Corona.
Sidoo kale ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa marxuumka alle uga baryey inuu ka waraabiyo Jannadiisa Firdowso.
“Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyska uu ka baxay ra’iisul wasaarihii hore ee dalka marxuum, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) oo ku geeriyooday London. Waxaan Alle uga baryayaa inuu naxariistiisa Janno ka waraabiyo, ehelkana uu samir iyo iimaan ka siiyo.” ayuu yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Nuur Cadde waxaa loo magacaabay ra’iisul wasaare bishii November sanadkii 2007-dii, xilliggaas oo uu dowladda KMG fadhigeedu ahaa magaalada Baydhabo .
Marxuumka ayaa sidoo kale ra’iisul wasaare ahaa tan iyo 2009-kii, ka hor wuxuu muddo dheer madax ka ahaa Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed.
This coronavirus is killing a lot of people. Is ilaaliya.
Allaha u naxariisto qofna dhaafi maayo wakhtigiisa
Afar bilood markaad uurka hooyadaa ku jirto yaa nafta lagu geliyaa waxaana laguu qoraa, intaad noolaanayso, waxaad cuni lahayd ama arsaaqdaada, iyo waxaad dhali lahayd ama duriyad qadarta lagama cararo.
Laakiin ratiggaaga dabro ilaahayna tawakal waa hadalkii rasuulkeenii suubanaa nabad galyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee
Macnaha is ilaaliya oo ilaahay tawakala.
Halyeey kale dalkeena u soo halgamay cudurkii xumaa u geeriyooday. Eebbe ha u raxmado C/qaadir Cali Boolaay.